I-china yenziwe yasebenza abakhiqizi beCarbon Fibre-Felt nabaphakeli | I-Beihai Fiberglass
Kuvulwe iCarbon Fibre-Felt
I-1.Yenziwe nge-fiber yemvelo noma i-fiber yokufakelwa engeyona eyelukiweyo ngokushaja nokwenza kusebenze.
Ingxenye eyinhloko yikhabhoni, enqwabelaniswa yi-carbon chip enendawo ethile enkulu (900-2500m2 / g), isilinganiso sokusatshalaliswa kwamapore ≥ 90% ngisho nokuvula imbobo.
3.Iqhathaniswa nekhabhoni esebenzayo eyimbudumbudu, i-ACF inamandla amakhulu okumunca nesivinini, ivuselelwa kalula ngomlotha omncane, nokusebenza okuhle kukagesi, anti-hot, anti-acid, anti-alkali futhi okuhle ekwakheni.
I-carbon fiber esebenzayo izwakala nge-fiber yemvelo noma i-fiber yokufakelwa engeyona eyelukiwe ngokufaka inethiwekhi nokwenza kusebenze. Ingxenye eyinhloko yikhabhoni, enqwabelaniswa yi-carbon chip enendawo enkulu ethile yendawo (900-2500m2 / g), isilinganiso sokusatshalaliswa kwamapore ≥ 90% ngisho nokuvulwa. Uma kuqhathaniswa ne-carbonular granular esebenzayo, i-ACF inomthamo omkhulu wokumunca nesivinini, ivuselelwa kalula ngomlotha omncane, nokusebenza okuhle kagesi, anti-hot, anti-acid, anti-alkali futhi okuhle ekwakheni.
● Ukumelana ne-acid ne-alkali
● Ukusetshenziswa kabusha
● Indawo engaphezulu kakhulu esukela ku-950-2550 m2 / g
● Ububanzi be-pore Micro ka-5-100A Isivinini esikhulu se-adsorption, izikhathi eziyishumi kuya kwezingu-100 kunalezo zekhabhoni eyenziwe ngoyimbumbulu
I-carbon fiber esebenzayo isetshenziswa kabanzi ku-
1. Ukuvuselelwa kabusha kwe-solvent: kungathatha futhi kusetshenziswe kabusha i-benzene, ketone, esters nophethiloli;
2.Ukuhlanzwa komoya: kungamunca futhi kuhlunge igesi enobuthi, igesi yentuthu (njenge-SO2, NO2, O3, NH3 njll.), I-fetor nephunga lomzimba emoyeni.
3. Ukuhlanzwa kwamanzi: kungasusa i-heavy metal ion, i-carcinogens, iphunga, iphunga elikhuntile, i-bacilli emanzini kanye ne-decolor. Ngakho-ke lisetshenziswa kakhulu ekwelapheni amanzi emanzini ahamba ngamapayipi, ukudla, izimboni zemithi nezikagesi.
4. Iphrojekthi yokuvikela imvelo: igesi kadoti nokuphathwa kwamanzi;
5. Isifihla-buso somlomo namakhala, imishini yokuvikela neyokulwa namakhemikhali, ipulaki yesihlungi sentuthu, ukuhlanzwa komoya endlini;
6.Munca okokusebenza okukhipha imisebe, okuhambisa izinto, ukucwengwa kwensimbi okuyigugu nokusebenzisa kabusha.
7. Ibhandeshi lezokwelapha, i-antidote enamandla, izinso zokufakelwa;
8.I-electrode, iyunithi yokushisa, uhlelo lokusebenza lwe-electron nezinsizakusebenza (amandla kagesi aphezulu, ibhethri njll.)
9.Izinto ezilwa nokubola, ukushisa okuphezulu nokumelana nokufakwa okubandayo.
Indawo ethile ye-BET（m2 / g）
Isilinganiso sokumunca i-benzene (wt%)
Ukufunxa i-iodine (mg / g)
I-Methylene blue (ml / g)
Ivolumu yokuvula (ml / g)
Langaphambilini Imicu yeBasalt
Olandelayo: Indwangu yeCarbon Fibre esebenzayo
Kuvulwe i-Carbon Felt